Toy izao asehon’ny sary izao ny santionan’ny endriky ny fanaovana taingimbe na “surcharge” matetim-pitranga amin’iny lalam-pirenena faha-6 any Antsiranana. Ny tranga sasantsasany tsikaritra omaly zoma 4 desambra ireo aseho an-tsary ireo. Rariny loatra, noho izany, raha ahitana taham-pihanahan’ny valan’aretina Covid-19 anisan’ny avo be tampoka teo any amin’iny tendrony avaratr’i Madagasikara iny. Miezaka mananatra, mitaiza, eny manasazy mihitsy aza ny mpitandro ny filaminana eo anatrehan’ny zava-misy.
Hiroso amin’ny fandatsahana orana any amin’ny sahandriakan’Andekaleka ny JIRAMA, miaraka amin’ny sampana mpamantatra ny toetrandro manoloana ny fahasahiranana ny famatsiana herinaratra eto amin’ny Tambazotra Iraisan’Antananarivo. Antony mahatonga izany ny fihenan’ny rano mampiodina ny tohodranon’Andekaleka, izay miantoka ny iray ampahatelon’ny herinaratra vatsiana eto amin’ny Tambazotra Iraisan’Antananarivo. Amin’izao fotoana izao, zara raha mamokatra 22MW ity tobim-pamokarana herinaratry ny JIRAMA, mandeha amin’ny rano ity raha tokony ho 93MW izany amin’ny mahazatra. Misy fahabangana lehibe araka izany ny lafiny famokarana herinaratra ka manery ny JIRAMA hanapaka 25MW (10%-n’ny filàna amin’ny hariva) mandritra ny adiny 2 eo ho eo, na dia efa nampiasaina daholo aza ireo milina rehetra mpamokatra herinaratra eo am-pelatanan’ny JIRAMA. Isan’ny tapaka amin’izany Andoharanofotsy sy ny manodidina ho an’ny ilany Atsimo ; Ambohimangakely sy ny manodidina ho an’ny ilany Atsinanana ; Analamahitsy sy ny manodidina ho an’ny ilany Avaratra ; Itaosy sy ny manodidina ho an’ny ilany Andrefana ary Analakely sy ny manodidina ho an’ny ilany Afovoany. Tanterahina avy hatrany ny fandatsahana orana vantany vao feno ny fepetra rehetra mikasika izany.
Saika ahazo orana avokoa ny faritry ny afovoan-tany rehetra manerana ny Madagasika mandritra ity herinandro ity. Tsy orana nampiana tosika na "pluie provoquée" anefa izany fa orana natoraly na oram-pahavaratra fotsiny ihany, ankoatra ny ao amin'ny faritany Fianarantsoa izay ny JIRAMA manokana no nangataka tamin'ny Météo Malagasy mba handatsaka orana any an-toerana. Natao mba hamatsiana ny rano izay vokarin'ny JIRAMA ho an'ny mpanjifa moa izany.Samihafa moa ny atao hoe : "pluie artificielle" sy "pluie provoquée". “Pluie provoquée” izay atao amin'ny alalan'ny famafazana sira eny amin'ny rahona manokana ahazoana teten-drano lehibe kokoa ka ahafahany milatsaka ho tonga orana ety an-tany. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 04 décembre 2020 10:10
Fifidianana loholona : Tsy hifidy ny mpanolotsaina KOMBA
Nanao fanambarana ao amin’ny pejiny facebook ny KOMBA, tarihin-dRakotoarisoa Faniry Alban fantatry ny maro amin'ny solon'anarana hoe : Gangstabab fa “tsy handray anjara, ary tsy hifidy, ny mpanolotsaina KOMBA ny 11 desambra izao”. Hotanterahina ny zoma 11 desambra 2020 ny fifidianana loholona. Miisa 12 no hofidiana, lisitra miisa 14 no hifaninana manerana ny Nosy. Mpifidy vaventy, Ben’ny tanàna sy mpanolontsain’ny tanàna no anisan'ny mpifidy.
vendredi, 04 décembre 2020 07:46
Mahanoro : Tontosa ny fametrahana ny vato fehizoron'ny Fanorenana ny Biraon'ny Kaominina
Tontosa ny alarobia 02 desambra ny fametrahana ny vato fehizoron'ny Fanorenana ny Biraon'ny Kaominina Manarapenitra eto Mahanoro, misy rihana iray sy trano fonenan'ny Ben'ny Tanàna. Famatsiambola avy amin'ny Fitondram-panjakana foibe amin'ny alàlan'ny Minisiteran'ny Atitany sy ny Fitsinjarampahefana. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 03 décembre 2020 06:11
Fianarantsoa : Nopotehina ampahibemaso ireo basy tsy ara-dalàna saron’ny Zandary
Notanterahina ny Alarobia 02 desambra 2020 nanoloana ny lapan’ny tanàna Fianarantsoa ny famotehana basy ampahibemaso nataon’ny avy ato amin’ny fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena Fianarantsoa. Nandritra ny taona 2019/2020 dia basy miisa 2500 mahery no azon’ny Zandarimariam-pirenena manerana ny Nosy, ka ny 2129 amin’ireo dia tao anatin’ny faritanin’i Fianarantsoa avokoa. Izao vokatra izao dia fitambaran’ireo basy tsy ara-dalàna izay azo teny ampelantanan’ireo mpanao ratsy, sy ireo azo noho ny fanateran’olona an-tsitrapo ihany koa.
lundi, 30 novembre 2020 20:27
Goverinoran'Ihorombe : Noraisina sy notsofin-drano tao am-piangoanana
Noraisin'ny fianakaviambe Katedraly Masina Maria Renin’Andriamanitra ao Ihosy nandritra ny Sorona masina ny Alahady 29 novambra 2020 ny Goverinoran'ny Faritra Ihorombe, Nomenjanahary André Tafita Sareine sy ireo mpiara-miasa aminy. Nambaran-dRamatoa Goverinora fa “Adidy iraisan'ny Kristianina ny fampandrosoana ny faritra, ary manana adidy amin'izany koa ny Fiangonana. Vonona izy hiara-miasa amin'ity farany”. Nandray azy sy ireo mpiara-miasa aminy ny Komitim-piangonana. (Jereo Sary Tohiny)
Miteraka resabe ny fahalanian’ny tolo-dalàna 03-2020/PL tao amin’ny Antenimieram-pirenena farany teo, izay manova tanteraka ny votoatin’ny lalàna laharana 2011-005 tamin’ny 01 aogositra 2011 mamaritra ny asan’ny “Géomètre expert” eto Madagasikara. Io lalàna 03-2020 io izay atao koa hoe : "Lalàna Raholdina" dia lalàna te hanova ny satan'ny géomètre expert. Anisany nijoro manohitra azy io ny SYGEP na syndika ivondronan’ny “Géomètre expert” eto Madagasikara, araka ny fanambarana nivoaka tamin’ny 13 novambra 2020. Taloha dia ny fanjakana no nisahana ny asa fandrefesan-tany sy ny manodidina izany. Tamin'ny taona 1990 tany anefa dia napetraka ny politika fisintahan’ny Fanjakana amin’ny seha-pamokarana rehetra toy ny fambolena, ny fiompiana, ny fandrefesan-tany sns. Nisy nalefa nisotro ronono nialoha ny fotoana mihitsy ny mpiasa nanoloana izany.
vendredi, 27 novembre 2020 12:54
Halatra jiro : Tokantrano miisa 18 no sarona nandritra ny fisafoana nataon’ny Jirama
Tokantrano miisa 18 eny Antsahameva sy Antsahamamy, Ankatso, samy ao amin’ny Boriborintany faharoa Antananarivo Renivohitra ny Alakamisy 26 novambra 2020, no tra-tehaky ny Jirama mampiasa herinaratra tsy ara-dalàna nandritra ny bemidina nanaovana fisafoana natao niaraka tamin’ny Zandary. Tokantrano iray ihany koa no hita fa misintona herinaratra mivantana amin'ny andrinjiro ary mizara amin'ny tokantrano dimy hafa manodidina. Mpiasan'ny Jirama iray no fantatra fa atidoha mikotrika izao fampidiran-jiro tsy ara-dalàna izao, ka nosamborina avy hatrany, ary tanana eny amin'ny Borigadin'ny Zandarimaria eny Betongolo hanaovana famotorana. Miteraka fatiantoka goavana ho an'ny orinasa, sady maharatsy kalitao ny famatsiana herinaratra sy rano ireny tranga halatra herinaratra sy rano ireny, ka tsy mandefitra na amin'iza na amin'iza manao izao asa ratsy izao ny Jirama, hoy ny fanambarana.
vendredi, 27 novembre 2020 12:51
Naina Andriantsitohaina : « Tsy mbola eo am-pelatanan’ny CUA ny fitantanana ny SAMVA »
Nanamafy ny Ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra, Naina Andriantsitohaina, tao amin’ny pejiny facebook fa « Tsy mbola eo am-pelatanan’ny CUA ny fitantanana ny SAMVA ankehitriny ». « Efa miandry izany mafy izahay, mba ahafahana mandray feno ny andraikitra », hoy izy manohy ny fanazavany. « Iaraha-mahita ny olana amin’ny fako eto Antananarivo amin’izao. Miangona ny fako, nefa efa akaiky ny fotoanan’ny orana. Sahirana ny SAMVA ». Ampiasana aloha ny fitaovana rehetra misy eto amin’ny Kaominina handraofana ireo fako. Ny fiara, fitaovana, olona sy izay rehetra eo am-pelatanana. Maharitra andro maromaro izany hetsika izany, hoy hatrany ny fanazavan’ny Ben’ny tanàna. Hatreto aloha, dia miankina amin'ny fitondrana foibe, ny ministeran'ny rano, ny fanalana ny fako sy fanadiovana ny tatatr'Antananarivo Renivohitra, izay iandraiketan'ny SAMVA. (Jereo Sary Tohiny)